China High Quality D Battery Holder ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
D ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည်သင်၏ဘက်ထရီများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန်ဝါယာကြိုးဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဝိုင်ယာနှင့်ပါသောဤ D ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသည့်ကိရိယာများသည် 3V ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သည်။
D ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
ဤ D ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည်ဓာတ်ခဲ ၂ လုံးထည့်နိုင်သည်။ Keyu အမှတ်တံဆိပ် D ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည်ခရီးဆောင်ဓာတ်မီးသုံး၊ ဓာတ်ငွေ့မီးဖို၊ အထူး DC ကိရိယာများစသည်တို့အတွက်သုံးနိုင်သော 3V ဗို့အားကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ မင်းက ၁၀၀% ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရမယ်။
D ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၏ထုတ်ကုန် ၂. သတ်မှတ်ချက်များ (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
အရွယ်အစား: ၇၂*၇၀*၃၁.၂ မီလီမီတာ
၁။ ဤ D ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည် 3V ဘက်ထရီကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်
၄။ D ဓာတ်ခဲနှစ်လုံးကိုကိုင်ထားပါ။
D ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၏ 4. ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
အရွယ်အစား: 72*70*31.2mmï¼Œကြိုးအရှည် = 150mm
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ D ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသူအားလုံး
ကျွန်ုပ်တို့သည် D ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းတွင်အနှစ် ၂၀ ရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းလုပ်ငန်း ၁၀၀ အတွက်ထောက်ပံ့မှုနှင့်ဖောက်သည်များစွာသည် ၁၀ နှစ်ကျော်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရုံသာမကဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြဿနာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်နမူနာပုံစံများ၊ သင် D ဓာတ်ခဲကိုင်ဆောင်သူအတွက်အခမဲ့နမူနာများရယူနိုင်ပြီးကုန်တင်ခအတွက်သာပေးချေပါ။
hot Tags:: D ဘက်ထရီလက်ကိုင်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ စတော့၊ အစုလိုက်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ တရုတ်၊ တရုတ်၊ တရုတ်၊ Made၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ လျှော့စျေး၊ အနိမ့်ဆုံးစျေး ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်